Wasiirka Amniga oo ka codsaday in la qisaaso Ragii dilay Gabadhii ardayada aheed | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Wasiirka Amniga oo ka codsaday in la qisaaso Ragii dilay Gabadhii ardayada...
Wasiirka Amniga oo ka codsaday in la qisaaso Ragii dilay Gabadhii ardayada aheed
C/kariin Guuleed ayaa sheegay in falka dilkaas ay hey’adaha ammaanka u soo qabteen kooxihii ka dambeeyay, isagoo ku sifeeyay dambigan inuu yahay mid qaran oo aan kaliya aheyn mid laga galay qoyskii gabadhaas ka soo jeeday.
Dambigan waa mid qaran, hadii ehelada gabadha la dilay cafiyaan xataa sharciga ayaa la marsiinayaa, waxaa ka codsanayaa hey’adaha garsoorka in qisaas lagu fuliyo kooxahaas”ayuu yiri Wasiir Guuleed.
Nafiso Cismaan Salaad oo aheyd ardayad ka qalin jebisay Jaamacada Soomaaliya kulyada kalkaalisenimada ayaa 6-dii bishan lagu dilay meel ku dhow hoygeeda oo ku yaal agagaarka Warshada Coca Cola, waxaana xilli habeen ah gurigeeda ka soo watay ilaa afar ruux oo ku hubeysan bastoolad, dabadeedna dilay.
Ilaa labo ruux iyo haweeney ayaa ciidamada nabadsugida ay u soo qabteen, iyagoo ragan oo loo soo bandhigay warbaahinta ay qirteen inay ka dambeeyeen dilkan, isla markaana ay jiraan labo kale oo falkan dilkan kala qeyb qaatay.
Previous articleWasiir Goodax waxaa jiro rag leexsaday raashiinkii loo diray Gobalada
Next articleGaari u lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo la qarxiyaya